बैंकिङ रोजगारी Archives ~ Page6of 24 ~ Banking Khabar
नविल बैंकले माग्यो झन्डै दुई सय प्रशिक्षार्थी कर्मचारी, यसरी गर्नुहोस् एप्लाई
नविल बैंक लिमिटेडमा झन्डै दुई सय जनाका लागि रोजगारी खुलेको छ । बैंकले १० जना मेनेजमेन्ट ट्रेनी र १८० जना ट्रेनी एसिस्टेन्ट गरी १९० जना फ्रेस कर्मचारी माग गरेको हो । दुवै पदका लागि बैंकले अनुभव मागेको छैन । एप्लाई …
बैंकिङ अन्तरबार्तामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
जागीरका लागि अन्तर्वार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ ? जागीरका लागि अन्तरवार्ता लिने क्रममा अन्त्यतिर रोजगारदाताले ‘केही जिज्ञासा छन् कि ?’ भनेर तपाईंंलाई सोध्न सक्छन् । उचित जिज्ञासा राख्न सक्नुभयो भने त्योे तपाईंंलाई आफू त्यो कामका लागि उपयुक्त उम्मेदवार भएको प्रमाणित गर्ने …
बैंकिङ रोजगारीका लागि के के चाहिन्छ ? हेर्नुस न्यूनतम योग्यताहरु
[रुपा कोइराला / कुनै पनि कम्पनीले कर्मचारी छनौट गर्दा कम्पनीको उद्देश्य र आवश्यकतामा ध्यान दिन्छ । कम्पनीको उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने, शैक्षिक योग्यता र अनुभवी व्यक्ति कम्पनीको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यस्तै कम्प्युटर, ड्राइभिङका साथै कम्पनीले खोजेको विषयसम्बन्धी जानकार व्यक्ति रोजाइमा …
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जागीर खुल्यो
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडमा जागीर खुलेको छ । बैंकले अफिसर र मेनेजमेन्ट ट्रेनी तहमा कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेको हो । अफिसर लेभलका लागि दुई देखि तीन वर्ष कमर्सियल बैंकमा काम गरेको अनुभव मागेको बैंकले मेनेजमेन्ट ट्रेनीका लागि अनुभव मागेको छैन …
मेगा बैंकले माग्यो १६७ जना कर्मचारी
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले १६७ जना कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले एसिस्टेन्ट लेभलमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेको छ । ९६ जना एसिस्टेन्ट लेभलका कर्मचारी माग गरेको बैंकले अफिसर लेभलमा ५२ जना र मेनेजर लेभलमा १९ जनाको दरखास्त …
जागिर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? तपाईँलाई नै कुरिरहेछन् यी कम्पनी
बेरोजगार युवालाई रोजगारको अवसर जुटाउने उद्देश्यले ‘जव् एण्ड करिअर फेयर’ हुँदैछ । यही शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चल्ने मेलामा रोजगारदाता र बेरोजगार युवाबीच सिधै सम्पर्क गराई जागिरको अवसर दिलाउनका लागि फेयर आयोजना गर्न लागेको बुधबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा …
सानिमा बैंकले माग्यो विभिन्न छ पदमा कर्मचारी
सानिमा बैंक लिमिटेडले विभिन्न छ पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले केन्द्रीय कार्यालयसहित केही शाखा कार्यालयहरुका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । सबै पदका लागि बैंकले अनुभव मागेको छ । आवेदन दिने म्याद १९ अगस्टसम्म रहेको छ । थप …
एनआईसी एसिया बैंकमा जागीर खुल्यो
एनआईसी एसिया बैंकले एक जना कम्पनी सेक्रेटरी माग गरेको छ । इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई १६ अगस्टसम्म आवेदन दिइसक्न आह्वान गरिएको छ । थप जानकारी तथा अनलाइन आवेदन दिनका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् : http://www.nicasiabank.com/careers/detail/5532
सिटिजन्स बैंकमा रोजगारीको अवसर !
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले ११ जना कर्मचारी माग गरेको छ । एप्लाई गर्ने म्याद १६ अगस्टसम्म रहेको छ । सबै पदका लागि बैंकले अनुभवी कर्मचारी मागेको छ ।
बैंकमा जागिर गर्ने हो ? यस्तो छ तपाईंलाई चाहिने योग्यता
रुपा कोइराला / कुनै पनि कम्पनीले कर्मचारी छनौट गर्दा कम्पनीको उद्देश्य र आवश्यकतामा ध्यान दिन्छ । कम्पनीको उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने, शैक्षिक योग्यता र अनुभवी व्यक्ति कम्पनीको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यस्तै कम्प्युटर, ड्राइभिङका साथै कम्पनीले खोजेको विषयसम्बन्धी जानकार व्यक्ति रोजाइमा …